Wararka Maanta: Khamiis, July 29, 2021-Afar ka mid ah kuraasta Aqalka Sare oo doorashadooda goordhaw lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo
Ilyaas Badal Gaboose ayaa noqday Xildhibaankii ugu horeeyay ee lagu doortay magaalada kismaayo, isagoo ka guuleystay Maxamed Axmed Sayid oo la tartamay, Ilyaas Gaboose ayaa helayay Codad gaaraya 55 halka Maxamed Axmed Sayid uu helay 17 Cod.
Kursiga labaad ayaa waxaa sida qorshuhu ahaa ku tartami rabay Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Axmed Maxamed Jaamac, hasa ahaatee waxaa tanaasulay Axmed Maxamed Jaamac waxaana cod gacan taag ah oo ay sameyeen golaha Wakiilada Jubbaland 71 mudane ugu codeyeen Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo sidaas ku noqday mudanahii labaad ee kusoo baxa kursiga labaad ee doorashada Aqalka sare.
Kursiga sadaxaad ee doorashada maanta ka dhacday Kismaayo waxaa ku tartamay Cabdirisaaq Maxamed Cismaan iyo Xaliimo Jaamac Maxamed waxaana ku guuleystay Cabdirisaaq Maxamed oo helay 59 Cod, halka Xaliimo Jaamac iyadana ay heshay 12 Cod.
Kursiga ugu dambeeyay ee ahaa kursiga afaraad ee kuraasta maanta lagu tartamaayay waxaa kuwada tartami lahaa Ibraahin Yacquub iyo Iftin Xasan Iimaan Baasto, hasa ahaate waxaa tanaasul sameeyay Ibraahin Yacquub waxaana sidaas ku guuleystay Cod gacan taag ah oo ay sameeyeen golaha Wakiilada Jubbaland Ifitin Xasan Baasto oo noqday Senatarkii afaraad oo maanta kismaayo lagu doortay.
Goobta doorashada ka dhacday ee magaalada Kismaayo waxaa ku wada sugnaa guddiyada doorashada heer Federaal iyo heer dowlad goboleed ee Jubbaland, guddiga Xalinta Khilaafaadka doorashooyinka iyo masuuliyiin kale oo goobjoog ka ahaa doorashada maanta ka qabsoontay Kismaayo.